အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ဖက်ထုပ်ဆီချက် နဲ့ တီချမ်းရဲ့ မနက်စာ ညနေစာ ညလယ်စာ
တကယ်ပါ အဟုတ်။ ဒီတခါနောက်ဆုံး နောက်ကို ဘယ်တော့မှ ခေါက်ဆွဲ ဆီချက် ဖက်ထုပ် တွေနဲ့ မနှိပ်စက်တော့ဘူး ကတိ ကတိ ကတိ။ အဲ့လို စာကြောင်းကို စပြီးသကာလ ရေးမယ့် အကြောင်းအရာ က ဖက်ထုပ်ဆီချက်ပါတဲ့ အရပ်ကတို့ရေ...........မရေးခင် တီချမ်း ရဲ့တနေ့တာ ကိုကြည့်ရအောင်နော်။ သူငယ်ချင်းတယောက် အိမ်မှာ အလည်ရောက်နေတာနဲ့ ညညဆို တော်တော်နဲ့ မအိပ်၊ မနက်မနက် ဆို ရင်လဲ တော်တော်နဲ့ မထ နဲ့ တီချမ်း တယောက် ဒီတပတ်ထဲ ရုံးကို နောက်ကျမှ ရောက်ရောက်နေပါတယ်။ အခု တင်ပြမယ့် အကြောင်းအရာတွေက မနေ့က ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေပါ။ ထားတော့ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းနေလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲနော်။ အေးချမ်း သာယာလှပတဲ့ တီချမ်းဘဝ ကို စာဘတ်သူ လူအများ မနာလို အူတို မုဒိတာ မပွားနိုင်ဖြစ်ကုန်ကြပေမပေါ့။ အမှန်က ဒီအပတ် တကယ့်ကို တနင်္လာနေ့ တရက်ပဲ သေချာ ရုံးတက်ရပါတယ်။ အင်္ဂါ ဗုဒ္ဓဟူးက ဖင်မှာ တုတ်စူးနေလို့အဲလေ နေမကောင်း ဖြစ်နေတာနဲ့ ဆစ်ခ်လစ်ဗ် ယူလိုက်ပါတယ်။ ဟော အခု ဘလောခ်ရေးနေတဲ့ ကြာသပတေးနေ့အကြောင်းကတော့ သူငယ်ချင်းရောက်နေလို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ရုံးကို နေ့လည်စာစာအပြီး အာဖတာ ၂ မှ သွားပါတယ်။ ညနေဘက်တော့ အားနာတာနဲ့ ၇ နာရီလောက်ထိနေပေးလိုက်တယ်။ ဂျန်နရပ်စ် ချက်နော်။ ဒီနေ့ သောကြာလဲ မနေ့ညက ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ ညည့်နက်သွားလို့ နေ့လည်မှ လာပါတယ်။ အမှန်က မလာတော့မလို့ပဲ ၂ နာရီ အစည်းအဝေး တခုရှိနေလို့ မလာမဖြစ်လာရပါတယ်။ နောက်ပြီး အကြံတခုပေးအုံးမယ်။ တီ့ လို ကိုယ့်အစည်းအဝေး ကိုယ် ချိန်းချင်တဲ့ အချိန်ချိန်းနိုင်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် ဆိုရင် အမြဲတမ်း ညနေပိုင်းကို ချိန်းပါ။ ဟိဟိ။
ဒါလေးကတော့ အိမ်ရောက်ရောက်ချင်း ချစ်မောင်က အမောပြေတိုက်တဲ့ OJ ပါ။ အဲ့တာလေး ကိုအမောပြေသောက်ပြီးတော့မှ မောင်ဘာစားမလဲ ဆိုတော့ သူကလဲ ညနေ မှ ထပါသတဲ့ အဲ့တာ နိုးတော့ ထမင်း ဝယ်စားထားပါတယ်တဲ့။ ဆိုတော့ ကိုယ်လဲ ထမင်းမစားချင် တာနဲ့ ကဲ ရှိတာ ဘာလဲ ရေခဲသေတ္တာ (သိပ်မသစ်တော့) ထဲမှာ မွှေတော့ ဖက်ထုပ်ရွက်တွေ ကျန်နေသေးတာ တွေ့ပါတယ်။ အဲ့တာနဲ့ လုပ်စားမယ်လေ ဆိုပြီ.........ဖက်ထုပ်ထုပ်ပါတယ်။ ဖက်ထုပ်သ အသားပြင်တာကိုတော့ တနေ့က ဖက်ထုပ်ပြုတ် လုပ်စားတုံးက တင်ပြီးသားနော်။ ဒီမှာ ကြည့်ပါ။ ဒေါ်ချစ်ကတောင် ပြောနေသေးတယ် စားလှချည်လား ဆိုပြီးတော့ အဲ့ဒီဖက်ထုပ်က တထုပ်ဝယ်ရင် အချပ် (ဖက်ထုပ်ရွက်) ၁၀၀ ပါပါတယ်။ အဲ့တော့ လုပ်လိုက် ပစ်ထားလိုက် စားလိုက်ပေါ့။
ဒါကတော့ ဟုိုတနေ့ကတည်းက ချက်ထားတဲ့ အမဲသားပါ။ ခေါက်ဆွဲနဲ့ ဆီချက် လုပ်စားလို့လဲရသလို ထမင်းနဲ့ စားလဲ ကောင်းပါတယ်။ ဒီမှာ ကြည့်လိုက်နော်။ အမဲသားချက်နည်းကတော့ ဒီမှာပါ။ နောက်ဆုံးက ဗူး ကတော့ ဒီဇင်ဘာလက ရန်ကုန်ပြန်တုံးက ယောက္ခမ လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ ငပိကြော်ပါ။ ကောင်းတယ် ကြက်သွန်ဖြူ ကွင်းကြီးတွေနဲ့။ စပ်စပ်ကလေး။ ထမင်းဖြူ ပူပူကို အဲ့လို ငပိကြော် အခြောက်အခြမ်းတွေနဲ့ စားရတာ ကြိုက်ပါတယ်။ ကဲကဲ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပဲနော်။ .........၄ နာရီ ၅၅ မိနစ် ရှိနေပြီရုံးဆင်းတော့မယ်။
Posted by တီချမ်း at 12:42 PM
Labels: ဆီပျံ, တီချမ်း ဟင်းချက်ခြင်း, အရွက်ကြော်, ခေါက်ဆွဲ
အဲတော. ရုံးကနေပို.စ်တင်နေတာပါလား တီချမ်းရေ ဟင်းချက်နည်းသာ များများတင်ပါ အမြဲလာပါတယ်
Evy February 3, 2012 at 9:20 PM
မနာလိုလိုက်တာ ရုံးသွားရတဲ့ရက်ကလည်း ကြည့်ဦး။ အစားအသောက်ကတော့ နေ့တိုင်းပို့စ်တင်လဲ မရိုးဘူး။ ဖတ်လို့ပိုကောင်းတယ်။ ရီလည်းရီတယ်။
ချစ်ကြည်အေး February 4, 2012 at 9:28 AM
စားချင်တယ်အေ။ ဖက်ထုပ်ကြိုက်တယ်အေ့း)
ခေါက်ဆွဲအစိမ်းတော့ မစားဘူးသေးဘူးးး။ အရောင်ကိုက အူယားလို့ ခွိး)))
GreenGirl February 4, 2012 at 11:22 AM
I always come and read T Chan. I like the way you cook and try myself one by one. :P
တီချမ်း February 4, 2012 at 3:51 PM
ဟုတ်ကဲ့ ရုံးကနေ အစည်းအဝေးပြီးတော့ တခြားမလုပ်ချင်တာနဲ့ပိုစ့်တင်နေတာပါ အနောရေ
အီဗီ မနာလိုမရှိပါနဲ့ တချို့ လူတွေက ကံကိုကောင်းတာ ဟိဟိ လင်ရလဲကံကောင်း အလုပ်ရလဲကံကောင်း အော် စိတ်ကောင်းရှိတာကိုးလေနော် ခိခိ စတာနော်
ဒေါ်ချစ် ကောင်းမှကောင်းပဲ ဟုတ်တယ် ခေါက်ဆွဲ အစိမ်က တမျိုးကြီးတော့ ဖြစ်နေတယ် ပြီးတော့ သူတို့ ခေါက်ဆွဲက အရမ်းမျှင်တော့ မြူစွမ်စားနေရသလိုပဲ
မိန်းမစိမ်း ပေါ်လာသေးတယ်နော် ဘလောခ် လဲဆက်မရေးတော့ဘူးလား ကျုပ်က သတိရပါတယ် အရင်တုန်းက တီချမ်း သမီးလေးတွေ ဆိုပြီး ကဗျာ ရေးခဲ့တာ သတိရသေးတယ်
Bino February 4, 2012 at 9:13 PM
ကိုယ်က သူတို့ဘလောခ် လိုက်မလည်တာနဲ့ပဲ မလာကြတော့တာရယ် ကိုယ်က ၂ လလောက် ဘာမှ မရေးပဲ ပျောက်သွားတာရယ် နဲ့အကုန် ပျောက်ကုန်ပါတယ်။
Oh! so bad. Likeamirror.
I'll come to your blog whatever you do. ( when I used internet)
တီချမ်း February 5, 2012 at 12:38 PM
thanks uncle BINO
yeah people are so practical like mirror LOL
aww tchan tchan
der vae pyaw lite tawt mae.
lin ya kan kg thu ma gyi ver ler kwe.:P
youke kha ma ya lae kg der vel naw.
Evy February 5, 2012 at 3:25 PM
တီတီချမ်း၊ အမဲသားလုံးချက်နည်း ထပ်ဖြည့်ပြီးကြောင်း။